Mudaaharaad ka dhacay Laascaanood; bilayska oo xabadeeyey ardayda mudaaharaaday; 3 arday oo ku dhaawacmay, 40-meeyo la xiray. – Radio Daljir
Mudaaharaad ka dhacay Laascaanood; bilayska oo xabadeeyey ardayda mudaaharaaday; 3 arday oo ku dhaawacmay, 40-meeyo la xiray.
Maajo 7, 2011 12:00 b 0
Laascaanood, May 07 – Mudaaharaad balaaran oo ay soo abaabuleen ardayda dugsiga sare ee Muuse Yusuf ayaa maanta ka dhacay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool.
Mudaaharaadka ayaa la xiriira xariga mucallim wax ka dhigi jiray dugsiga sare ee Muuse Yusuf oo maalmo ka hor la xiray, laguna eedeeyey in uu ku lug lahaa falal-dambiyeedyo isugu jira dilal iyo qaraxyo oo hore uga dhacay magaalada Laascaanood.
Ciidaka bilayska ee magaalada Laascaanood ee Somaliland ayaa xabadeeyey ardayda, taasina ay sababtay khasaare oo gaaray qaar ka mid ah ardayda.
Inta la xaqiijiyey, 3 ka mid ah ardayda ayaa dhaawacyo soo gaareen, halka afartameeyo kalena la xiray.
Macallimka xiran oo magiciisa la yiraahdo Sh. Maxamed Macallim ayaa ku xirnaa xabsiga dhexe ee magaalada Laascaanood muddo todobaad ah.
Taliyaha ciidanka bilayska Somaliland ee gobolka Sool ayaa xaqiijiyey dhaawaca soo gaaray ardayda, sheegayna in sababta loo xabadeeyey ardaydu ay ahayd si looga hortago rabshado ka dhasha mudaaharaadka.
Laascaanood ayaa sannadigii la soo dhaafay waxaa ka dhacay dilal iyo qaraxyo lagu ugaarsanayo madaxda gobolka iyo saraakiisha ciidanka ee Somaliland ee ku sugan gobolka Sool.
Wasiirka warfaafinta ee Puntland oo safar ka soo laabtay shirna ku qabtay Garoowe.
Ururka Al-qaacida oo qiray dilka hogaamiyahoodii Sh. Usaama bin Laden, kuna baaqay weeraro hor leh & aar goosi.